Wararka Maanta: Khamiis, July 30, 2020-Xasan Shiikh “Guddoomiyaha Baarlamanka farriin nooma sidin, innagana mid kale uma dhiibin”
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin ajende gaar ah oo ay ka wada hadleen iyaga iyo Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya.
“Waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed iyo kuwa isoo wacayba in uusan jirin Ajande gooni ah oo aan ka wada hadalnay Guddoomiyaha Baarlamanka, ma jirin farriin uu innoo siday , innagana uma dhiibin farriin kale” ayuu Xasan Shiikh Maxamuud ku yiri hadalkiisa .
Dhinaca kale, waxa uu soo hadal qaaday in Guddoomiyaha Baarlamanka uu kamid yahay madaxda qaranka ee Soomaaliya, horayna ay dhowr jeer u kulmeen.
Mar uu ka hadlayay arrimaha doorashada ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin wax iska bedalay mowqifkoodii ahaa in dalka laga qabto doorasho waqtigeeda dhacda oo ku timaada is-ogol siyaasadeed.
“Ma jiraan wax iska bedalay mowqifkeennii doorashada, waxaana aaminsanahay haddii talooyinkeenna la qaato in la qaban karo doorasho wanaagsan” ayuu mar kale yiri Xasan Shiikh Maxamuud.
Ugu dembeyn wuxuu bogaadayay shirkii ka dhacay dhuusamareeb, isagoo soo dhoweeyay g’aannadii la isla qaatay.
7/30/2020 8:56 AM EST